U Zikalala nohlelo lokubumba isifundazwe – Sivubela intuthuko Newspaper
U Zikalala nohlelo lokubumba isifundazwe
UNdunankulu waKwa Zulu-Natali ethula inkulumo yakhe kwi Media Interactive Session eThekwini Isithombe: Sibulelo Dlamini
UNdunankulu waKwa Zulu-Natali uMnu Sihle Zikalala uthe kuyinhloso ngqangi yakhe ukubumba isifundazwe sa Kwa Zulu-Natali, ekhuluma kwi Media Interactive Session ebeyibanjelwe eThekwini u Zikalala uthe uzosebenza ubusuku nemini ukuletha uzinzo esifundazweni.
“Kuyisibophezelo sethu ukwakha isifundazwe esibumbene, sizosebenza ngokuzikhandla ukuletha uzinzo esifundazweni. Sifisa ukubona abantu ba Kwa Zulu-Natali bebumbene kungakhathaleki ukwehluka kwebala, ubuzwe kanye nobulili. Sekuyisikhathi sokuthi sikhuthaze ubunye kubantu bakithi, sifuna ukwakha umphakathi ophumelelayo nobambisene ukunqoba izifo nobubha,” kusho u Zikalala.
U Zikalala uthe kuyabakhathaza ukwenyuka kwezinga lokusetshenziswa kwezidakamizwa esifundazweni, uthe bazosebenzisana nazo zonke izinhlaka ukuqinisekisa ukuthi bayalwisana nalesi sihlava.
“Sifisa ukukhuthaza ulusha oluhambela kude nokusetshenziswa kwezidakamizwa, sibhekene nengwadla yolusha oseluphenduke imilutha yezidakamizwa. Sizosebenza ngokuzikhandla ukulwa nalesi sihlava, sinezinhlelo esizibekele ukuphucula abantu abasha ikakhulukazi labo asebeke baba izisulu zezidakamizwa,” kulandisa u Zikalala.
IRICHARDS BAY FC IQINISA ISIKWATI SAYO
I SIFTE ikomelise izitshuseni ezenze kahle